MANANTSOA VICTOR : “Ilaina adihevitra matanjaka amin’ny vahoaka ny fikitihana lalàm-panorenana”
Mivoitra hatrany ny fanehoan-kevitra arahina adihevitra manoloana ny ho fanovana na tsia ny lalàmpanorenana izay kasain’ny mpitondra hatao ankehitriny. 27 octobre 2017
Nitondra izay fanehoan-keviny izay ihany koa ny minisitra teo aloha, Manantsoa Victor izay nanambarany fa “ilaina adihevitra matanjaka ary mila hakana hevitra amin’ny vahoaka malagasy ny fanatanterahana izany fanovana ny lalàmpanorenana izany”.
Araka ny fanehoan-kevitra noentin’ity mpanao politika ity dia tsy tokony izay fanapahan-kevitry ny mpitondra fotsiny no hatao fa ilaina ihany koa ny mihaino ny vahoaka. Tokony homena lanja ao anatin’izany ny fomba Malagasy hoentina manova ity lalàmpanorenana izay kasain’ny mpitondra hatao izay. “Raha tsy maintsy hirosoana izay fanovana ny lalàmpanorenana izay dia tsy tokony ho ao anatin’ny hamehana sy ny kitoatoa fa atao araka ny fomba malagasy”, hoy ny voalazany.
“ Mila fifanarahana izany, ary mila dingana matanjaka be ka tsy tokony hatao tandrametaka satria efa tandrametaka no nanaovana an’io, ka tsy tokony hatao kitoatoa intsony satria mitarika amin’ny fahoriam-bahoaka”, hoy hatrany ny minisitra teo aloha, Manantsoa Victor raha naneho ny heviny.
Miray feo ny ankamaroan’ireo mpanao politika izay mahita fa tsy hitondra tombontsoa na kely akory aza ho an’ny fiainam-bahoaka io fikasan’ny mpitondra io. Ity farany anefa ankilany mikiry hatrany ny hanova ny andininy vitsivitsy ao anatin’ny lalàmpanorenana, anisan’izany ilay andininy faha-47 izay iantsoan’ny Filoham-pirenena adihevitra misokatra ho an’ny rehetra mihitsy.